VIDEO: Mpanolotra TV Pakistaney Manolotra Zaza Roa ho Valisoa Mandritra Ny Seho Ramadany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jolay 2013 22:17 GMT
Nitodihan'ny maso indray ny mpanolotra fandaharana fahitalavitra iray raha nanome zaza nilaozana ho fanomezana mivady iray tsy mananjanaka nandritra ny lalao fahitalavitra iray.
Efa nanome zaza roa hatramin'izao ilay Televangelisitra Dr. Amir Liaquat Hussain nandritra ny volana Ramadany, ao amin'izay velabelarin'ny sasany ho fitadiavana hanamaro ny mpijery hahazoana laharana mandritra ny volana masina islamika. Malaza dia malaza tokoa ao Pakistan ny ampaha-potoan-dalao sy ny ampaham-potoam-pivavahana , Seho Liaquat Amaan Ramzan ao amin'ny fantsom-pahitalavitra Geo News.
Natolotr'i Muhammad Ramzan Chhipa, filohan'ny Chhipa Welfare Association [Fikambanana mpanao asa sosialy Chhipa], izay niteny tao amin'ny gazety britanika the Telegraph hoe “maro ny zaza nilaozana, nariana eny amin'ny fanariam-pako na toerana hafa maloto” ireo zaza natolotra nandritra ny Seho.
Feno fifaliana sy nihetsi-po latsa-dranomaso ny iray amin'ireo mpivady izay nahazo zazavavy kely, araka ny tatitra sy ny sioka taorian'ilay fotoana.
Toy izao no nanombohan'ny mpanolotra ny seho hita ao amin’ ity lahatsary ao amin'ny YouTube nakarin'i WWN ity:
Maro ny zaza ariana any amin'ny fanariam-pako, arian'ny olona ao aminareo ao, izay mieritreritra fa “nanota” ry zareo, miangavy aho fa ianao, aza tsiny indrindra re, aza manary azy ireny any amin'ny fanariam-pako, eny fa na dia eritreretinareo fa teraka tsy nisy ota izy ireny, miangavy aho ny hanomezanareo azy ireny eny amin'ny mpandray zaza kamboty, mba ho tafaraka amin'ny olona mendrika azy izy ireny, olona te-hamahana sy hitaiza azy ireo.
Na dia azo atao tokoa aza ny fanampiana fianakaviana mitady zaza hanjanaka zaza nilaozana, dia feno fanafintohinana ny tambajotra sosialy Pakistaney, mitsikera amin-kery ny Liaquat manao ny zaza ho loka zaraina.
Nampiseho ny fahatafintohinany tamin'ny alalan'ny sioka ny tonia lefitry ny bilaogy Tribune, Imaan Sheikh (@SheikhImaan) :
Jereo ny fandaharam-potoanan'i Amir Liaquat izao. Aaj bacha giveaway hai. [Anio ny fanomezana zazakely] Tsy vazivazy, nanome zaza bitika ry zareo.
Tsy latsa-danja ihany koa ny fahagagàn'ny mpanao gazety Zarrar Khuhro (@ZarrarKhuhro) :
Andraso kely… Nanome zaza nandritra ny Sehony ve i Amir Liaquat? Ilazao aho hoe vazivazy izany. Marina?
Amin'ireo televanjelisitra Pakistaney malaza, dia tsy vahiny amin'ny fanaovan-javatra mampiady hevitra i Liaquat. Nafanavay ny fitsikerana azy rehefa hitam-bahoaka, taona maro lasa izay, fa avy amin'ny vondrona tsy eken'ny maro ny diploma azony vita ambaratonga faharoa. Tamin'ny 2008 ihany koa dia niatrika fiampangana ho mandranitra herisetra tamin'ireo vitsy an'isa Ahmadis izy rehefa nanao fitsikerana io sekta io nandritra ny Seho iray manontolo.
Amir Liaqat Hussain. Saripika via Wkipedia. BY-SA
Ary tamin'ny 2011, niakatra indray ny onja rehefa tafaporitsaka ny ompa sy ny teny ratsy nataon'i Liaquat ambadiky ny sehatra.
Saingy misy kosa ireo mankasitraka ny fanomezana zazakely mandritra ny Ramadany ataon'i Liaquat ho fanampiana ny zaza kamboty ho any amin'ireo fianakaviana tsy manan-janaka. Tsy manangona ny antontan'isa ofisialin'ny zaza kamboty ny governemanta, ny hany isa fantatra dia ireo angonin'ny mpandray zaza kamboty avy amin'ny tsy miankina. Ny ankamaroan'ny zaza kamboty moa dia alain'ny fianakaviana akaiky ihany. Saingy nitombo ny isan'ny “zaza nilaozana” niafara teny amin'ny akanin'ny zaza kamboty. Tamin'ny 2012, araka ny tatitry ny gazety Pakistaney, dia 171 ny isan'ny zaza nilaozana ao amin'ny fandraisana zaza kamboty lehibe indrindra ao amin'ny firenena antsoina hoe Edhi. Nahitana fatin-jazakely nariana 485 ihany koa nanerana ny firenena, fa na tsy manambola enti-mitaiza ny zaza ny ray aman-dreniny na teraka ivelan'ny fanambadiana izy ireny
Araka ny nolazain'ny mpianatra ho dokotera Tahani Zaidi (@TahaniZaidi):
Ilay mpivady ao amin'ny sehon'i Amir Liaquat, nanagan-jazavavy kely. Fantatro manokana izy ireo. Mihetsi-po latsa-dranomaso :’)
Taorian'ny fandaharana fanomezana zazakely, mbola nitodihan'ny maso indray i Liaquat raha nanasa mpihira noambanimbaniana sy noesoesoana fatratra, Taher Shah, tao amin'ny sehony. Nahazo ny lohateny lehiben'ny gazety maro i Shah tamin'ny famoahany ny hira mitondra ny lohateny hoe “Eye to eye” [imaso imaso] izay nalaza haingana noho ny hatsaran'ny “so bad, it's good” ao aminy.
Tao amin'ny seho, nanala azy tamin'i Shah teo am-pihirana i Liaquat, tamin'ny nilalaovany ny volon'i Shah sy ny famihimpihinany azy. Nandritra io fotoana mivantana io dia tsy nahazo aina mihitsy i Shah raha miramirana tokoa i Liaquat.
pikantsarin'ny fampisehoana nataon'ny mpanoratra. Taher Shah (havia) sy ny Dr. Amir Liaquat Hussain.
Niteraka sidin-tsikera maro tao amin'ny tambajotra sosialy indray izany, tamin'ny fitakiana ny mpanolotra fahitalavitra hanao fialantsiny amin'i Shah. Nisioka momba ilay toe-javatra i Samad Khurram (@SamadK):
Nametraka bibilava velona tamin'i Taher Shah i Amir Liaquat raha nitafatafa taminy nandritra ny fandaharam-potoam-pivavahana. Izany no fiafaran'izao tontolo izao!
Nisy moa ireo somary nasiatsiaka kokoa tamin'i Liaquat. Nisioka ny mpanao gazety Omar R Quraishi (@omar_quraishi):
Tsy maintsy miteny aho fa tena tsara tokoa ny fitondra-tenan'i Taher Shah nandritra ny fitondratena adaladalan'i Amir Liaquat.
Nizara sata tao amin'ny pejiny ofisialy ao amin'ny Facebook ihany koa i Taher Shah izay mbola nitazonany ny fitoniany nandritra ny seho raha hita miharihary ho diso fanantenana noho ny natao azy izy:
Tena diso fanantenana tokoa aho tamin'ny fotoanan'ny Amaan Ramazan androany. Voalohany miantso olona ry zareo sy miangavy ho ao amin'ny sehony ary aty aoriana rehefa miezaka ny handao ny fanaony andavanandro ny olona dia ataony toy ny zazakely. Tokony hisaotra ahy i Amir Liaqat tamin'ny tsy nitenenako zavatra ratsy momba azy na ny seho mivantana ataony (izay mba nety ihany ho ahy). Mampalahelo ny mahita fihetsika tsy manaja natao nandritra ny fotoana lazaina ho Islamika.
Ny zava-nitranga notantaraina etsy ambony ireo no mahatonga ny fanontaniana maro momba ny adidy sy andraikitry ny fahitalavitra tsy miankina. Aiza ny tsipika mena farany [tsy azo ihoarana] amin'ny fitadiavana laharana ambony? Fa angaha ny manampahaizana ara-pivavahana tohanan'ny tranom-pampitam-baovao lehibe tsy mba voafetran'ny andraikitra ara-pitondratena, eny fa na dia ao amin'ny seho mivantana aza?